एमबिबिएस पास गरेपछि तेस्रो बर्षमा हिडिरहेको छु म । म हिडिरहेको छु किनकी म काम गर्ने निकाय कागजमा दौडिए पनि यथार्थमा हिडिरहेका जस्ता छन्। म समयसँग दौडिन खोज्छु । म पाइला अगाडि सार्न खोज्छु । रफ्तार बढाउन खोज्छु । तर मेरो काम गर्ने सरकारी अड्डा सधैं हिडिरहेको हुन्छ । किनभने बिरामीको आशा अनुसार सेवासुबिधा गतिमान छैन । सेवाग्राही भने म भन्दा छिटो दौडिन थालेर हो कि संचार, जनचेतना र यातायातले फड्को मारेर हो । सेवाग्राहीले बिशिस्ट छिटो सस्तो र राम्रो सेवा खोज्ने गर्छन्। समस्या सेवाको खोजीले भन्दा पनि उनिहरुको आत्तुरिपन र अर्धचेतनाले खडा गरेको छ । बिरामी जाँच्नु ,परामर्श दिनु र उपचार गर्नु त मेरो कर्तब्य नै हो । हो। म सधैं सबै रोगको उपचार गर्न असमर्थ छु । जानेसम्म गर्ने प्रयास भने अवस्य गरेजस्तो लाग्छ । बाँकी केसहरु त माथिल्लो सुबिधायुक्त अस्पातलमा प्रेषण गर्नुको बिकल्प हुँदैन म सँग । जसलाई मैले प्रेषण पुर्जामा "रेफर " भनेर लेख्ने गर्छु । ।
सामान्य रुघाखोकीका बिरामीदेखि लिएर पक्षघातजस्ता अनेकन बिरामी अस्पतालमा सेवा लिनका लागि अाइपुग्छन् । धेरै बिरामीहरु जिल्ला अस्पतालको तहमै उपचार तथा परामर्श गर्न सकिए पनि केही बिरामीको निदान वा उपचारको लागि माथिल्लो निकायमा प्रेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि मानौँ कोही बिरामीका लक्षणबाट पक्षघात भन्ने कुरा निदान गर्न सकेपनि थप उचित निदान गर्नका लागि उपकरण र बिशेषज्ञ सेवाका निम्ति कागजमा "रेफेर्ड टु हाइयर सेन्टर" लेख्नुपर्ने हुन्छ । लडेर आएको बिरामीको एक्स रे गरेर हेर्दा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने देखिएमा प्राथमिक उपचार गरेर पठाउनुपर्ने हुन्छ । निदान र उपचारको पूर्ण सेवा नभएका बिबिध समस्याहरुमा मैले "रेफेर " गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात जिल्ला अस्पतालको टिमले उपकरण वा बिशेषज्ञ सेवाको अभाबमा प्रेषण गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कुनै भर्ना गरिएको बिरामीमा सुधार नदेखिएमा वा नयाँ लक्षण देखिएमा प्रेषण गर्नुपर्ने किटान गरेर बिरामीको उचित उपचारको लागि "रेफेर " भनेर पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो बेला बिरामीले केही आक्रोश केही चिन्ता मिसिएको कटु स्वरमा भन्ने गर्छन् " पहिले किन नपठाएको ? " कुन बिरामीमा उपचारको क्रममा जटिलता अाउला भनेर त कसरी भबिष्यबाणी गर्नु !
अस्पतालको उपचार गर्ने सामर्थ्य नहुँदा " रेफर" गर्नु अस्वाभाबिक हैन । तर रेफर गरेर मात्र सधैं उम्किन कहाँ सकिन्छ र ? कहिलेकसो त बिरामी माथिल्लो निकाय पुग्न आर्थिक रुपले असमर्थ हुन्छन् भने कोही बिरामी सुबिधायुक्त अस्पातलमा बारम्बार लैजाँदा थाकिसकेका हुन्छन् । माया मारिसकेका हुन्छ्न् । कोही भने समाजको गाल जोगाउनलाई मात्र भए पनि उनीहरुले सबैभन्दा ठूलो अस्पताल मानेका जिल्ला अस्पतालसम्म ल्याउँछन् । घर र बाहिर दुबैतिर पठाउन नसकेपछी भर्ना गर्नुको बिकल्प कहाँ हुन्छ र ? समय समयमा त्यस्ता सिकिस्त बिरामीहरुले जिल्ला अस्पताल भरिएको हुन्छ । कुनै "टर्सरी अस्पताल " (उपचारको निम्ती सबैभन्दा माथिल्लो स्तरको अस्पातल ) भन्दा कम हुन्न । अभाब त केबल "टर्सरी अस्पतालको " सेवा सुबिधाको हुन्छ । बढी हुन्छ ड्युटी डाक्टरको मनमा बिरामीको इहलीला समाप्त हुने सन्त्रास । खर्चको जोहो गर्ने प्रयास गर्दा छोटो समयमा पर्याप्त पुग्दैन । अस्पातलबाट गरीब बिरामीको लागि प्रदान गर्न सकिने प्रेषण खर्च ४००० सम्म दिएर मात्र पनि भएन । बाँकी रहेको खर्च कताबाट जुटाउने हो ! त्यसैले हरेक अस्पतालमा अनिबार्य " गरीब बिरामीको कोष " स्थापना गर्नुपर्ने हो कि ? त्यति थोरै प्रेषण खर्चको त लोभ गरेर भन्सुन गरि हत्याउने पहुचवालाको गिद्ध दृष्‍टि त्यस कोषमा पनि नपर्ला त भन्न सकिन्न । तथापि त्यसको आबस्यकता भने समय समयमा खट्किएको महसुस हुन्छ । शायद अहिले स्वास्थ्य बिमा लागू भएका जिल्लाहरुमा दामको चटारो बिनाको स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभुती भएको होला भन्ने आशा गर्छु ।
" रेफेर " अर्थात प्रेषण भन्ने शब्दको अर्को पाटो पनि सबैलाई ज्ञान हुनु जरुरी देखिन्छ । अस्पतालमा भिड्भाड गरेर बिरामीका टाठाबाठा पल्टिने गन्नेमान्ने आफन्तजनले प्रहरिले अपराधीलाई जस्तो डाक्टरलाई बयान लिन थालेपछि बिचरा आत्तिएको डाक्टरले के सल्लाहा दिने होला ! त्यस्पछि त सामान्य रुघाखोकि पनि बाहिर पुग्ने अवस्था हुन्छ । " यहाँ भन्दा राम्रो उपचार कहाँ हुन्छ ? डाक्साप । " भनेर सोधिने जिज्ञासामा त वीर अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टरले पनि देश बाहिर नै भन्नुपर्ने हुन्छ होला। मैले अञ्चल अस्पताल वा क्षेत्रिय अस्पताल भन्नुपर्ने हुन्छ । राम्रो उपचार र परामर्श पाउनु त जनताको अधिकार हो । तर बिरामीलाई रोगको प्रकृति र त्यसको सम्भाबित उपचार भनेर आफूले जानेको उपचार गर्न खोज्दा " ग्यारेन्टि " भन्ने शब्दले फेरी अत्ताउँछ ।
सामान्य समस्या जस्तो देखिएकोले स्थानिय तहमै उपचार गर्न सकिने आँकलन गरेर औषधी गर्न खोज्यो । बिरामीको आशंकाले ठीक नहुने पीर पर्छ । । के गर्नु ! चौबिसै घण्टा जिवन्त र सुक्ष्म रुपमा चलायमान रहने इन्जिनियरिङको अद्भुत नमूना मानब शरीरको "ग्यारन्टी " त कसरी लिनु ! बैज्ञानिक आधारमा अधिकाम्समा देखिने समस्याको लक्षण चिन्ह र परीक्षणले रोगको निदान र उपचार गर्ने हो । ठ्याकै शत प्रतिशत भन्नलाई न त रोगले गणितिय सूत्र मान्छ न त मानब शरीरले । "रेफेर " गरे " किन " रेफेर" गरिस् ? र "रेफेर" नगरे " किन गरिनस्? " भनेर स्वास्थ्यकर्मी र डाक्टरलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सुहाउँछ र ? केबल सेवाको दुरी र अबिश्वासको खाल्डो बढाउने प्रपञ्च हैन भनेर कसरी भन्नु ? यो मामिलामा बिरामीका आफन्तजन देखी राजनैतीक दलका प्रतिनिधि र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्म अछुतो छैनन् । जानकारी लिने भाषाभन्दा दमनको अप्रिय भाषा हाबी भएको देखिन्छ । अब सम्रक्षण कता खोज्न जाने हो ?
" यो अस्पताल त रेफरिङ् अस्पताल हो । अन्त पठाइहाल्छन् । के आउनु ? " भन्ने ब्यक्तिहरु धेरैजसो अस्पातल वरिपरिका स्थानिय ब्यक्तिहरु हुने गरेको मैले पाएको छु । अरु साथीहरुको पनि अनुभव यस्तै होला । कतिका त तीता र टिठ्लाग्दा अनुभब होलान् । अचेल लापर्बाहीको आरोप र तोड्फोड त नसुनेको नभोगेको बिरलै होलान् । ति ब्यक्तिहरुले के कुरा नबुझेको जस्तो लाग्छ भने त्यही अस्पातल अलि दुरदराज जनताको लागि भरोशाको केन्द्र हो । वीर अस्पातल सरह हो । अस्पातल आउन आईतवारको साइत मिलाएका हुन्छन्। स्थानियबाट नमिठो प्रतिकृया आउनु शायद नजिकको तीर्थ हेला भएर होला । हुन सक्छ सेवामा अस्पतालले पूर्ण विश्वाश दिलाउन नसकेको हो कि । अथवा यातायातको सुबिधा घरदैलोमै, इष्टमित्रको जमात र रुपैयाको त्यति बिधि खट्को नपर्ने भएर पनि बाहिर जाने हुटहुटी हुने होला । अरुबेला चासो नराख्ने स्थानियहरु बिरामी हुँदा भने बल्ल अस्पतालको परिवेस सतही रुपमा थाहा पाउँछन् । अनि आमाको काखमा बसेर मामालाई सत्तोसराप गर्छन् ।
सबै रेफर गरिएका बिरामी सरकारी अस्पातलमै उपचार पाऊन् भन्ने मनसायले पठाए पनि सबै सरकारी अस्पातलमै पुग्छन् भन्ने सुनिश्चित हुँदैन । निजी अस्पतालको महँगो शुल्क आँफै रेफेर मागेर गएकाले त तिर्न सक्लान् । तर सामान्य ब्यक्तिलाई त घरखेत बेच्नुपर्ने हुन सक्छ । र सबै सरकारी अस्पातल चाहिएको सेवा दिन अहिलेको अवस्थामा सक्षम छन् भन्ने पनि छैन । जे भए पनि सरकारी अस्पातल नै बिरामीको पहिलो रोजाइ हुनुपर्छ। र त्यसको बातावरण सिर्जना गर्नु सबैको दायित्व हो । कुनै " रेफर " त बिरामीले मौकाको फाइदा उठाउने कुटिल उद्देस्यले रेफेर लेख्दिन बारम्बार दबाब दिने गर्छन्। । धेरै जसो दुर्घटनाका केसमा आर्थिक भार अर्कैमा थोपरिने हुँदा मान्छेको स्वार्थी मन जाग्दो रहेछ ।
अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र डाक्टरलाई उपचार गर्ने कुरोमा भरपुर सहयोग ,आबस्यक विश्वाश र सकारात्मक सोच राख्न सकेमा सेवामा सुनमा सुगन्ध थपिने थियो। सबैले काम गर्ने कर्मचारीको मर्म बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सुरक्षाको सुनिस्चितता हुनुपर्छ। नभए त तितोपनाको बेस्वादिला घटनाहरुको स्वाद अस्पतालका भित्ताभित्तामा गढेर बस्नेछन् । कटुताको ईतिहास बारम्बार दोहोरिनेछन् । र त्यो हत्तपत्त मेटिँदैन । त्यसपछि त कसैको वास्ता नपुगेर अस्पताललाई कालान्तरमा दिर्घायु असर पर्नेछ । आफ्नो अस्पताललाई सरोकारवाला सबैले शब्द खर्चेर भन्दा समय खर्चेर माया गरौँ । जागिर मात्र खान गार्हो छैन । तर सेवा वजनदार हुन सक्
दैन । म हिडिरहेका बेला दौडिएर स्तरोन्नती भएका अस्पतालहरु कागजमा जति दौडिए पनि व्याबहारिक रुपमा बामे सरिरहेको प्रत्यक्ष पाएको छु । जसरी प्रसुति सेवामा धेरै जिल्लाहरुमा कार्यसम्पादन प्रशंसनीय रहेको छ । त्यसरी नै बामे सर्दै सर्दै एक दिन दुर्गमका अस्पतालहरुले बिभिन्न बिधाका बिशेष सेवा दिएर छलाङ मार्ने छन् भन्ने कुरामा आशाबादी छु ।